Global Voices teny Malagasy » Pakistana: Fihetseham-pon’ny Olona Manoloana Ny Didim-pitsarana Manafintohina Azon’ny Praiminisitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Mey 2012 2:31 GMT 1	 · Mpanoratra Kumail Ahmed Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Nifarana ihany ny toe-draharaham-pitsarana nahavoarohirohy an'ny Praiminisitra Pakistaney Yousuf Raza Gilani. Didim-pitsarana sarintsariny 37 segondra  fotsiny no sazy navoakan'ny fitsarana ho an'ny Praiministra, ho famaranana ny raharaham-pitsarana naharitra tao anatin'ny telo volana. Nilaza ny mpandinika fa tsy hamaha ny olana momba lalampanorenana efa misafotofoto ny didy navoaka, fa vao maika hampitombo olana indray.
Fanampin'izany, niteraka fisaritahana teo amin'ny vahoaka izany izay nampizarazara azy ireo  na ny mpanohana ny Praiminisitra na ny mpanohitra azy. Etsy andaniny, nidina an-dalambe ny vahoaka hitaky ny fampiharana ny demokrasia ao amin'ny firenena. Etsy ankilany, nilaza ny olona sasany fa manan-jo hanazava tsara ny voalazan'ny lalampanorenana ny Fitsarana tampony.
Mpanohana ny antoko'ny fitondrana Pakistana nandritra ny hetsika. Sary avy amin'i Rajput Yasir. Copyright Demotix.
Maro ireo olona nilaza fa tsy ara-demokratika no nitsaran'ny fitsarana tampony ny raharaha.
Nazar M. Chohan naneho hevitra hoe :
Ankafizin'ny Fitsarana tampony sy ny mpitsara ambony ao ny mampisara-kevitra ny fiaraha-monina…fantaro izany!!!
Nampatsiahy ireo seho niverimberina i Imran. Nanitsakitsaka foana ny demokrasia ny Fitsarana Tampony ary nanohana foana ny didy jadona.Nilaza izy hoe :
Tsy mahagaga…. mihazona ny voninahiny fotsiny ny Fitsarana tampony.
1. Nekena ny lalàna miaramila avy amin'i Ayub
2. Nekena ny lalàna miaramila avy amin'i Zia
3. Notapahin-doha ny praiminisitra
4. Nandroaka indroa ny governemantan'i Benazir
5. Nankato ny lalàna miaramila avy amin”i Musharraf
6. Namela an'i Musharraf hanova ny lalampanorenana
7. Namela an'i Musharraf hirotsaka hofidiana filoham-pirenena nefa mbola tao anatin'ny tafika izy [Musharraf]
Yesmeen Ali nisioka hoe:
@yasmeen_9 : Fantatrao ny lalàna. Tsy nahavoasazy ny Praiminisitra fahatezeram-bahoaka.
Ahsan Riaz Chaudhary nisioka hoe:
@chahsanriaz : Andriamanitra ô, Najoro ny #CJ  [fitsarana] hametraka “manokana” ny Praiminisitra #Gilani  hody any an-trano! #SupremeCourt  #Pakistan 
Nilaza ny olona sasany fa fandresena ho amin'ny fahamarinana ny didy nivoaka. Nanambara kosa hafa fa tokony hametra-pialana tsy ho Praiminisitra intsony i Gilani ary hanatontosa ny didy navoakan'ny fitsarana ambony.
@hamza101 : Tsy fahafaham-baraka ho an'ny fitsarana fotsiny i Gilani, fa namadika tanteraka ny #Pakistan ..!#PPPFail 
@alihzinsaf : Fantatra fa meloka i #Gilani . Tsy tokony ho meloka izany hoe #PM  izany. Fa tokony manana fahamendrehana ny #PM  ary manana fitondratena ambony sy tokony ho olom-pirenena modely eo amin'ny fanjakana.
@malikakissxkhan:  #Gilani  Aotra ny fahamendrehanao sy ny fanajanao ny tenananao. Aotra ny fahitsim-ponao eo amin'ny Pakistan. Vazivazy ny fangatahanao fitsarana ambony. Tsy misangisangy aho. Mialà
Hita mazava tsara ny fironana na manohana ny Praiminisitra na ny manohitra azy. Ny antokon'ny mpanohitra, PML-N (Ligin'ny Miozolomana Pakistana – Nawaz) sy ny PTI (Pakistan THahreek Insaf) niangavy  ny Praiminisitra hiala araka izay haingana indrindra.
“Hiala ve ny PM “, izany no fanontaniana an-tapitrisany dolara mipetraka. Mbola vao haingana loatra no nivoaka ny didim-pitsarana, ka te-hamarana ny fe-potoam-piasany voalazan'ny lalampanorenana ny antoko ao amin'ny fitondrana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/07/32968/
 37 segondra: http://dawn.com/2012/04/27/%E2%80%A237-second-contempt-punishment-causes-confusion-govt-allies-decide-to-challenge-verdict-down-but-not-out/
 nampizarazara azy ireo: http://www.thenews.com.pk/Todays-News-5-105191-Public-opinion-divided-over-Supreme-Court-verdict
 naneho hevitra hoe: http://tribune.com.pk/story/373421/resolution-against-gilani-ppp-lawyers-create-ruckus-in-rawalpindi-district-court/
 Nilaza izy hoe: http://tribune.com.pk/story/370675/convicted/